Akụkọ - LightCounting: Ngwaọrụ nkwukọrịta anya ga - abụ ihe izizi ga - agbake site na COVID-19
Na Mee., 2020, LightCounting, otu ụlọ ọrụ nyocha ahịa ahịa anya ama ama ama kwuru na site na 2020, mmepe mmepe nke ụlọ ọrụ nkwukọrịta ngwa anya siri ike. Na njedebe nke 2019, ọchịchọ maka DWDM, Ethernet, na wireless fronthaul toro elu, na-ebute ụkọ nke ọnụọgụ.
Agbanyeghị, na nkeji nke mbụ nke afọ 2020, ọrịa na-efe efe nke COVID-19 manyere ụlọ ọrụ gburugburu ụwa imechi, nrụgide yinye wee rute n'ọkwa ọhụrụ. Imirikiti ndị na-ebubata ngwongwo na-akọ mkpata dị ntakịrị karịa atụ anya na nkeji nke mbụ nke 2020, na atụmanya maka nkeji nke abụọ bụ nke ejighị n'aka. Emeghere ụlọ ọrụ na China na mbido Eprel, mana imirikiti ụlọ ọrụ dị na Malaysia na Philippines ka na-emechi, ụlọ ọrụ ndị dị na Europe na North America amalitere ịmaliteghachi ọrụ. LightCountin kwenyere na ọchịchọ a na-achọ ugbu a maka njikọ anya na netwọkụ nkwukọrịta na ebe data dị ike karịa na njedebe nke 2019, mana ụfọdụ ọrụ ntanetị na ụlọ ọrụ data na-egbu oge n'ihi ọrịa ahụ. Ngwa ngwa modul na-eweta agaghị enwe ike ị nweta atụmatụ mmepụta mbụ ha n'afọ a, mana ọpụpụ dị elu na ọnụahịa ngwaahịa nwere ike belata na 2020.
LightCounting na-atụ anya na ọ bụrụ na ụlọ ọrụ dum amaliteghachi na ọkara nke abụọ nke afọ a, akụrụngwa ngwa anya na ndị na-eweta modul ga-amaliteghachi ọrụ zuru oke na nkeji nke anọ nke 2020. A na-atụ anya na ahịa nke modulu ngwa anya ga-abawanye n'ụzọ kwesịrị ekwesị na 2020 ma ga-abawanye site 24% site na 2021 iji gboo mkpa bandwidth ka ukwuu maka ngwa.
Tụkwasị na nke a, nke China na-emewanye ngwa ngwa 5G, ire nke ngwa anya maka ikuku na-aga n'ihu na azụ ga-abawanye site na 18% na 92%, n'otu n'otu, nke ka bụ ihe mgbaru ọsọ maka afọ a. Tụkwasị na nke ahụ, ahịa nke ngwaahịa FTTx na AOC na ụdị njikọ anya, nke nkedo na China, ga-eto site na ọnụọgụ abụọ site na 2020. Ethernet na ahịa DWDM ga-amaliteghachi ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ na 2021.